“သင်၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လမ်းညွှန်” | Shwe Canaan TV
“သင်၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လမ်းညွှန်”
00Unknown Friday, 10 June 2016
Tips to Maintain Your Spiritual Health ကျွန်တော်အားလုံးသည် မိမိတို့ ရုပ်ခန္ဓာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တတ်ကြသည်။ လူ တိုင်း မှန်ကြည့်သည်...
Tips to Maintain Your Spiritual Health
ကျွန်တော်အားလုံးသည် မိမိတို့ ရုပ်ခန္ဓာကို
တိုင်း မှန်ကြည့်သည်။ ဆံပင်ရှည်လျှင်ညှပ်
သည်။ မကျန်းမမာ မဖြစ်ရအောင် သတိပြုနေ
ထိုင်ကြသည်။ မှန်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏
ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အ
ရေးကြီးသည်ဟု ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့၏
ရှောက်ဖို့ရန်မူကား ပို၍ပင် အရေးကြီး လှပေသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်ပဲ သင်၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် အကြံပြုချက် အချို့ ကို ေ၀ငှသွားပါမည်။ သည်အကြံတွေအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျှင် သင်သည် ၀ိညာဉ်ရေးရာ၌ “ကျန်းမာသန်စွမ်းနေသူ” ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
၁။ တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံးနာရီ၀က် (ဖြစ်နိုင်လျှင် တစ်နာရီခန့်) အချိန်ကို သီးသန့် ပယ်ထားပြီး ဘုရားသခင်နှင့် တစ်ဦးချင်းအချိန် (Quiet Time) ယူပါ (ဒံယေလ ၆း၁၀) (မာကု၊ ၁း၃၅)။ ၄င်းသည် သင့်၀ိညာဉ်ရေးအသက်တာ၏ အဓိက ရေသောက်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
၂။ သင်၏ အတွေးစိတ်ထဲတွင် ညစ်ညမ်းသော အတွေး၊ အနုတ်လက္ခဏာ ဆန်သောအတွေး၊ ခါးသည်းနာကျည်းစေသော အတွေးများ၀င်ရောက်လာလျှင် ချက်ချင်း အာရုံပြောင်းလဲရန် လုပ်ဆောင် ပါ (ဖိလိပိ္ပ ၄း ၈)။ ဥပမာ-- ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုခြင်း၊ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် အဆက်မပြတ် ဆုတောင်းခြင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာကို အသံထွက်ဖတ်ရွတ်ခြင်း၊ စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
၃။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားထံတော်မှ တန်ခိုး၊ ဘိသိက်နှင့် မေတ္တာကို နေ့စဉ်ဒူးထောက်ပြီး တောင်းခံပါ (တမန်တော် ၁း၈၊ ရောမ ၅း၅)။
၄။ သင်အသက်ရှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသမျှသည် ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာ ရှိနေကြောင်း အမြဲသတိပြုပါ (သုတ္တံ ၁၅း၃၊ ဆာလံ ၁၃၈း၇)။
၅။ ယေရှုဆိုလျှင် ဘာလုပ်မည်နည်း? What would Jesus Do? (WWJD)
ယေရှုဆိုလျှင် ဘာတွေးမည်နည်း? What would Jesus Think? (WWJT)
ဆိုသည်ကို အမြဲသတိရပြီး ဆုံးဖြတ်၊ ပြောဆို၊ လုပ်ဆောင်ပါ ( ၁ပေ၊ ၂း ၂၁၊ ဖိလိပိ္ပ ၂း ၅)။
၆။ သမ္မာရှိ ကျမ်းပိုဒ်များကို အချိန်အားလပ်တိုင်း ရနိုင်သလောက် အလွတ်ကျက်မှတ်ပါ။ မကြာခဏ ပြန်လည်စဉ်းစား ဆင်ခြင်ပါ။ အလွတ်ပြန်ဆိုပါ (ဆာလံ ၁၊ ယောရှု ၁း ၈)။
၇။ ခရစ်တော်၌ ရှိသော သင်၏အရိုက်အရာ၊ အခွင့်အာဏာနှင့် ရပိုင်ခွင့်များအကြောင်း စဉ်းစား ဆင်ခြင်ပြီး ပြောပါ။ ၀မ်းမြောက်ပါ။ မကြာခဏ ရယ်မောပါ (ဖိလိပိ္ပ ၄း၄)။
၈။ အချိန်အနည်းငယ် ယူပြီး သင်၏အနာဂတ်အတွက် ဘုရားသခင်ဖေါ်ပြသော ရူပါရုံအကြောင်း စဉ်းစား ဆင်ခြင်ပြီး ပြည့်စုံပြီဟု ယုံကြည်လျှက် စိတ်အာရုံထဲ၌ ပုံဖေါ်ပါ (ကမ်ဘာ၊ ၃၀း၃၇-၃၈၊ ဟေဗြဲ ၁၁း၁)။
၉။ စာအုပ်စာပေကောင်းများကို မကြာခဏ ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။ ၄င်းသည် သင်၏ အတွေးခေါ်နှင့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာကို မြှင့်တင်ပေးရုံမက အမြင်ကို ကျယ်စေပါသည် (သုတ္တံ ၄း၅)။
၁၀။ “ကောင်းမှုတစ်ခု၊ နေ့စဉ်ပြု” ဆိုသောစကားအတိုင်း သူတစ်ပါးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေသောအရာ တစ်ခုခု (သေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ)ကို ပြုလုပ်ပါ (ဟေဗြဲ ၁၃း၁၆)။
၁၁။ တိတ်ဆိတ်သော နေရာ၌ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး နားထောင်သည့် အလေ့ အကျင့်ကိုပြုပါ။ သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ပေါ်လာသောအရာများကို စာရွက်ပေါ်ချရေးပါ (ဆာလံ ၄၆း၁၀)။
(အထူးမှတ်ချက် - သန့်ရှင်း၀ိညာဉ်တော် ဖေါ်ပြသည်ဆိုသော အရာများသည် ကျမ်းစာနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ၄င်းသည် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်မဟုတ်ကြောင်း သတိချပ်ပါ။)
၁၂။ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာနှင့် ၀ိညာဉ်ခွန်အားကို တိုးပွားစေမည့် ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို၊ သီချင်းခွေ၊ တရားဟောခွေတစ်ခုခုကို မကြာခဏ ကြည့်ရှုနားထောင်ပါ။ ပြီးနောက် ပြန်လည် ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပါ (ရောမ ၁၀း၁၇)။
၁၃။ သင်သိရှိထားပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေသော သမ္မာတရားတစ်ခုခုကို အခြားတစ်ဦးအား ပြန်လည် ေ၀ငှ သက်သေခံပါ (ဟေဗြဲ ၁၀း၁၄-၂၅)။
၁၄။ နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် အခြေပြုလျက် မိမိကိုယ်မိမိ အားပေးတည်ဆောက်သည့် စကားများကို ပြောဆိုပါ။ ၀န်ခံမြွက်ဆိုပါ (ဆာလံ ၁၀၃း ၁-၅)။ ၄င်းကို မိမိတစ်ဦးတည်းရှိသည့်အချိန်/နေရာတွင် မကြာခဏ ပြုလုပ်ပါ။
၁၅။ သင်နှင့် သဘောတူသည့် လူတစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးသုံးဦးနှင့် မကြာခဏ တွေ့ ဆုံပြီး အတူတကွ ဆုတောင်းပါ (မဿဲ ၁၈း ၁၉-၂၀)။
“၀ိညာဉ်ရေးရာ၌ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ များဖြစ်ရန် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် ကူမတော် မူပါစေ” (၁ကော၊ ၁၅း၁၀)။
Shwe Canaan TV: “သင်၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လမ်းညွှန်”